Farriintii Sacuudiga ay Iran u direen kadib dilkii Jeneral Suleymani oo la shaaciyey | Xaysimo
Home War Farriintii Sacuudiga ay Iran u direen kadib dilkii Jeneral Suleymani oo la...
Dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa fariin ay ku dalbaneyso wadahadal u dirtay Dowladda Iiraan, sida uu shaaca ka qaaday Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan, Mohammad Javad Zarif.
Wasiirka arrimaha dibada ee Iiraan ayaa sheegay in dilkii Jeneraal Qasim Suleymani kadib ay dowladda Sacuudigu u dirtay Warqad ay kaga dalbanayaan wadahadal.
Waxa kale oo uu Wasiirku xusay in dowladda Sacuudigu aysan ka soo jawaabin fariintoodii aqbalaad ee ay kaga falcelisay dowladda Iiraan dalabkii Sacuudiga ee wadahadalka.
Wasiirka ayaa arrintaasi ku sheegay Warsaxaafadeed uu soo saaray, kaasi oo uu si cad ugu xusay in Dowladda Tehran ay diyaar u tahay in dalalka dariskeeda ay la furto wadahadal, midaasi oo ay ku jirto Dowladda Riyadh.
“Waxaan diyaar u nahay maanta inaan wadahadal la yeelano dhammaan waddamada deriska ah, maxaa yeelay gobolka waxaa iska leh dhammaan waddamada deriska ah. Waddamada gobolka ayaana mas’uul ka ah xaqiijinta amniga iyo xasilloonida gobolkaba”.